Akụkọ - Etu esi eji brush ntọala enweghị akara akara?
Kedu otu esi eji brush ntọala enweghị akara akara?
1. Ọ kacha mma ịhọrọ ntọala mmiri mmiri.
Agbanyeghị na a na -eji ahịhịa ntọala ahịhịa ahịhịa, ọ bụghị textures niile nke ntọala nwere ike ịchacha ntọala zuru oke. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzere akara ahịhịa, mgbe ahụ ọ kacha mma ịhọrọ ntọala mmiri mmiri.
N'ihi na ntọala mmiri mmiri na -adịkarị mfe, ọ na -adị mfe iji ahịhịa ntọala were were gbasa ahịhịa ahụ, ọ gaghịkwa adị mfe ịhapụ akara ahịhịa mgbe etinyere ya na akpụkpọ ahụ, ntọala ya ga -adịkwa otu, dị gịrịgịrị ma dịkwa larịị.
2. Mee ụfọdụ ndozi maka ahịhịa ntọala.
Mepee ahịhịa ntọala ọhụrụ a zụrụ, wee wụsa ntọala mmiri mmiri a na -ejighị na mpempe akwụkwọ tin, jiri ahịhịa mmiri wee tinye ahịhịa ntọala, gbaa mbọ hụ na ejiri mkpuchi kpuchie kpuchie bristles ọ bụla, wee kechie ya na akpa rọba ma ọ bụ Kechie plastik kechie isi ahịhịa wee debe ya na ọnọdụ akara maka nkeji ole na ole, wepụta ahịhịa ntọala, hichaa ntọala ozugbo ma ọ bụ jiri akwa nhicha akwụkwọ hichaa isi ahịhịa iji hichaa ntọala ahụ, isi ga -adị nro ma sie ike. Akara ahịhịa adịghị mfe ịpụta.
3. Ghichaa ọtụtụ "丨" na ihu ya na ntọala.
Ejila ahịhịa ntọala ozugbo were ntọala mmiri mmiri wee tinye ya na ihu gị. Kama nke ahụ, fanye mkpụrụ ego nke ntọala na ọbụ aka gị ma ọ bụ ebe obibi (ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọ kpọrọ nkụ, gbakwunye otu ude mmiri ma gwakọta ya nke ọma), wee jiri ahịhịa ntọala were obere ego Ntọala mmiri mmiri Mgbe ahụ see ọtụtụ obere akara “丨” n'ihu, wee jiri brọsh ntọala wee jiri nwayọọ hichaa ya azụ na azụ. Ọ bụghị naanị na nke a ga -ezere ịhapụ akara ahịhịa, kamakwa ọ ga -eme ka ntọala ahịhịa bụrụ akwa.
4. Lezienụ anya na ike nke ahịhịa ntọala.
Ị nwere ike chọpụtala na brushes ntọala na -abụkarị nke eriri sịntetị, yabụ bristles nke isi ahịhịa nwere ike sie ike. Ị ga -amarịrị ike mgbe ị na -eji ya. N'ozuzu, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji ike 0 were swipe, aka agaghịkwa adị arọ iji zere ịcha. Ọkpụrụkpụ nke akpụkpọ ahụ ma ọ bụ ntọala enweghị mkpachapụ anya, mana ike ekwesịghị ịdị obere, nke ga -eduga nhịahụ akara nsị na ahịhịa ntọala.
5. Mụta usoro ahịhịa nke akụkụ dị iche iche.
Mgbe ị na-eji ahịhịa ntọala were nnukwu ebe dịka ntì, agba, ma ọ bụ n'egedege ihu, ọ kacha mma ịhọrọ ahịhịa ntọala dị larịị ma jiri akpụkpọ ahụ were ogo 30. Mgbe ị na -ehicha imi, mpaghara anya ma ọ bụ egbugbere ọnụ, were obere ihe dochie ya. Ezubere ntọala ntọala dị larịị/oblique iji hichaa ebe anya na akụkụ aghụghọ nke ihu, wee guzoro ahịhịa ahụ wee jiri nwayọọ hichaa ya ọzọ. N'ụzọ dị otu a, akara brọsh adịghị mfe ịpụta n'akụkụ ụfọdụ dị aghụghọ ma ọ bụ nke nwere ntụpọ.
6. Mee ezigbo ọrụ nhicha.
Mgbe i jichara ya, ịkwesịrị iji ndị na -ewepu etemeete ọkachamara iji hichaa ahịhịa ntọala iji mee ka ojiji ọzọ dị, na oge ọzọ ị ga -eji ya, ọ gaghị enwe akara ntụpọ n'ihi isi ahịhịa na -enweghị isi.
7. Mgbe ịchasịrị ntọala, fesa mmiri wee pịa ihu.
Ka itinyechara ntọala ahụ, jiri mmiri na -agba ume ka ịsa nkwụ ma ọ bụ ogbo, wee jiri nwayọ pịa etemeete ntọala ọzọ. Nke a ga -eme ọ bụghị naanị na -eme ka akpụkpọ ahụ kpoo nkụ, kamakwa ọ ga -ewepụ akara ahịhịa nke ahịhịa ntọala kpatara, na -ahapụ ihe nchacha elu ka ọ dị ọcha. Ọ dabara nke ọma.
Ndị a bụ ndụmọdụ maka otu esi eji ahịhịa ntọala na -enweghị akara ncha. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka etemeete ntọala enweghị ntụpọ na ntụ ntụ, ị nwekwara ike nwalee nsonaazụ ahịhịa. Ọ dị mfe ịmalite na -emekwu ihe.
Oge ezipụ: Aug-06-2021
Mee Ncha, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, Ịkpụ afụ ọnụ, Nịm etemeete ahịhịa, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, etemeete ahịhịa setịpụrụ,